Mivoaka mpifaninana ny Galaxy Note 7 ary misy ny milina fanasan-damba Samsung koa nipoaka tsy nisy fampandrenesana | Vaovao momba ny gadget
Samsung Tsy fotoana mahafinaritra amin'ny olana goavana naterak'ilay Galaxy Note 7 vaovao, noho ny fipoahana izay mijaly nefa tsy misy fampitandremana. Ankehitriny ary indrisy ho an'ny orinasa Koreana Tatsimo dia toa tsy nifarana ny resaka fipoahana ary izany ve maodely manokana an'ny milina fanasan-damba, novokarin'i Samsung, miaina fipoahana tsy ampoizina na voafehy.
Toa somary matotra ity raharaha ity satria ny US Consumer Product Security Commission (CPSC amin'ny fanafohezana azy amin'ny teny anglisy) dia niandraikitra ny fanomezana fampandrenesana an'ireo mpampiasa milina fanasan-damba Samsung.
Ny maodely voakasik'izany dia ny WA50F9A7DSP / A2 izay misy vavahady entana eo an-tampony. Ny milina fanasan-dàlana olana dia namboarina teo anelanelan'ny volana martsa 2011 sy aprily 2016. Amin'izao fotoana izao dia efa misy trangana fipoahana 3 amin'ity maodelin'ny milina fanasan-damba ity.
Ny iray amin'ireo tompony dia nanambara tamin'ny haino aman-jery isan-karazany fa ny milina fanasany "Nipoaka tamin'ny hafanam-po mahery vaika izy ka niditra tao amin'ny rindrin'ny garazy", izay azo antoka fa tsy mamela ny mpampiasa milina fanasan-dàlana Samsung ho milamina loatra.
Amin'ny lafiny iray, ny orinasa Koreana Tatsimo dia manandrana mitady ny olana, izay toa vokatry ny hovitrovitra tsy ara-dalàna. Ny hany tolo-kevitr'i Samsung hatreto dia ny fampiasana programa fanasana lamba fohy kokoa, izay tsy nisy ny olana momba ny fipoahana.
Samsung dia manana olana manangona Ary taorian'ny fipoahan'ny Galaxy Note 7, izay nitentina an-jatony tapitrisa euro, ankehitriny dia toa mitohy hatrany ny olan'ny fitaovana izay mipoaka, na dia toa olana lehibe kokoa aza ity indray mitoraka ity ary tsy mitovy amin'ny fipoahana finday avo lenta mankany mipoaka milina fanasan-damba, noho ny refy sy ny lanjany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » About us » Ny Galaxy Note 7 dia manana mpifaninana ary misy ny milina fanasan-damba Samsung koa mipoaka nefa tsy misy fampandrenesana mialoha